Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Ciidanka Wayaanaha Lagu Wiiqay oo Sabati Kadhacay.
Dagaal Ciidanka Wayaanaha Lagu Wiiqay oo Sabati Kadhacay.
Posted by Dulmane	/ October 4, 2016
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Jarar ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya dagaal culus oo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo kuwa Wayaanaha ku dhexmaray Gobolka, Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in dharbaaxo lama ilaawaan ah dagaalkaas lagu gaadhsiiyay ciidanka gumaysiga Itoobiya ee doolka kujooga ciida Ogadenia.
Sida warku sheegayo dagaalka ayaa bilowday kadib markay ciidanka dhaqanka xun ee wayaanuhu dhac iyo jidh dil kabilaabeen deegaanka Sabati oo Dagmada Dhagaxbuur katirsan waxaana weerar kusoo qaaday Ciidanka Xoraynta Ogadenia oo deegaankaas kadhawaa.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay Naftood Hurayaasha Xoraynta Ogadenia usuurta gashay in ay cagta mariyaan ciidankii gumaysiga ee halkaas kusugnaa waxaana lagu soo waramayaa in uu ciidananka cadawga soo gaadhay khasaare lixaad leh oo aan wali lasoo faah faahinin.
Dagaalkan oo dhacay 1/10/16 ayaa laga dareemay dhamaan Gobolka Jarar waxaana dhaawicii wayaanaha lakala geeyay Jigjiga iyo Dhagaxbuur.